छक्कापञ्जा–२ तन्नेरीहरूको वैदेशिक रोजगारीको कथा हो – Everest Times News
छक्कापञ्जा–२ तन्नेरीहरूको वैदेशिक रोजगारीको कथा हो
कुनै बेला रेडियो नेपालमा ‘धनियाँ’को नामले परिचित दीपाश्री निरौला यतिबेला चर्चित चलचित्र निर्देशक बनेकी छन् । छक्कापञ्जा नेपाली चलचित्रबाट निर्देशन थालेकी उनले यही फिल्मको सिक्वेल छक्कापञ्जा–२ मा पनि निर्देशन दिएकी छन् ।
पहिलो फिल्मबाटै वाहवाही बटुलेकी उनको यो दोस्रो फिल्मले पनि दर्शकलाई हलसम्म तान्ने विश्वास गरिएको छ । पहिलो फिल्मले सय दिन मनाएपछि दोस्रो फिल्ममा मनग्गे मेहेनत गरेको फिल्म निर्माण समूहको दाबी छ ।
रेडियोका दुनियाँपछि टेलिभिजनको हास्य श्रृंखला ‘तितोसत्य’मा पनि अभिनय गरिन् उनले । त्यसो त उनी तितोसत्यकी सहायक निर्देशक पनि हुन् । नाटकबाट अभिनय सुरु गरेकी उनी ठुलो पर्दामा आइपुगेर एक सफल निर्देशकका रुपमा स्थापित भएका छन् । उनको निर्देशनमा बनेको फिल्म छक्कापञ्जा–२ असोज ११ अर्थात सेप्टेम्बर २७ मा अलनेपाल रिलिज हुने भएको छ । अमेरिकामा भने छक्कापञ्जा–२ को व्यापारिक सम्झौता अर्जून सुवेदीसँग गरिएको छ । यसै विषयमा निर्देशक निरौलासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानीः
तपाईंहरुले फिल्म चाडपर्वमै रिलिज गर्नुहुन्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
पहिलो छक्कापञ्जा त भदौमा रिलिज भएको हो । फिल्म राम्रो भएपछि सय दिनसम्म चल्यो । यसले महानपर्व दसैं तिहार पनि मनायो । यसपटक पनि संयोगवश दसैं अगाडि नै रिलिज हुने भयो । त्यसैले पनि छक्कापञ्जा टिमले चाडपर्वको मौका पारेर रिलिज मिति तय गरेको हो । फिल्म निर्माण भएपछि सकेसम्म धेरैले हेरिदेओस भन्ने चाहना फिल्म निर्माण पक्षको हुन्छ । हाम्रो पनि त्यस्तै चाहना हो । भाग्यबश महान पर्व नजिकै रिलिज गर्ने मौका पायौं । चाडपर्वमै धेरैको बिदा मिल्छ । यस्तो बेलामा रमाईलो पनि त गर्नुप¥यो ।
कतिको रमाईलो बनाउनु भएको छ यसपटक ?
अघिल्लो फिल्म दर्शकहरुले निकै पराइदिनुभयो । त्यसैले यसपटक त हामीले दुःख गर्नैपर्ने बनाइदिनुभयो दर्शकले । अघिल्लोपटकको भन्दा राम्रो र फरक कथा भएन भने त हामीलाई पक्कै पनि पत्याउने छैन । त्यसैले अघिल्लो फिल्ममा भन्दा धेरै मेहेनत गरेका छौं । छक्कापञ्जाको सिक्वेल भएपनि कथा सिक्वेल छैन । क्यारेक्टर मात्र सिक्वेल हो । कथा विल्कुलै नयाँ ढंगको भएकोले दर्शकले मनपराउनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
तर, गीतमै विवाद आएर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो नि, दर्शक भड्के जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
गीतमा विवाद आएकै हो । हाम्रो गल्ती भएकै हो । हामीले थाहा पाउने बित्तिकै त्यो सच्यायौं । त्यो समाधान भइसक्यो पनि । संगीतकारसँगको विश्वासले गर्दा दीपक दीपामाथि सबै खनिएका हुन् । हामीले यो पनि बुझेका छौं । पछि अल्मोडासँग कुराकानी भएपछि मुल सर्जकलाई हामीले क्रेडिट दियौं । सर्जकलाई मार्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मुल अभिप्राय हो । हामी पनि दुःख गरी गरी सिर्जना गर्छौ । हामीले सर्जकलाई पीडा दियौ भने भोलि त हाम्रो पनि पालो आउँछ । त्यसैले हामी सर्जक र उसको सिर्जनालाई सम्मान गर्छौ । यही विषयले दर्शक भड्केलन् भन्ने पटक्कै विश्वास हामीलाई लाग्दैन ।
यसपटकको सिक्वेलको मुख्य विषयवस्तु के लाई बनाउनुभएको छ ?
अघिल्लो पनि वैदेशिक रोजगारकै विषय थियो । यसपटक पनि वैदेशिक रोजगारकै विषयलाई उठान गरिएको छ । तर यसपटक तन्नेरीको विषयलाई समेटिएको छ । समाजमा भए गरेका तितासत्यहरुलाई नै उनेका छौं ।
छक्कापञ्जा–२ अमेरिकामा कहिले प्रदर्शन हुन्छ ?
यसको सम्पूर्ण जिम्मा अर्जुन सुवेदीजीले लिनुभएको छ । सायद उहाँले अक्टोबरको सुरुतिर प्रदर्शन गर्नुहुन्छ होला । छक्कापञ्जाको प्रदर्शनपछि हामी छक्कापञ्जा टुरमा नोभेम्बरमा अमेरिका आउने कार्यक्रम तय भएको छ । अहिलेसम्म दीपकराज गिरी, म, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ र जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ आउने निश्चित भइसकेको छ । त्यतिबेला पनि प्रत्यक्ष भेटेर पक्कै पनि छक्कपञ्जा टिमले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिलाउनेछ ।
छक्कापञ्जा सिक्वेल अरु पनि आउँछ कि ?
पक्कै पनि हामीले छक्कापञ्जा–३ का लागि एउटा गीत रेकर्ड गरिसकेका छौं । फिल्म फागुन चैतबाट सुटिङ सुरु हुन्छ ।
नेपाली फिल्मी उद्योगमा तपाई एक सफल महिला निर्देशकको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ यसरी सफल हुदै गर्दा ?
यसअघि पनि सशक्त र सफल महिला निर्देशकहरु नेपाली फिल्मी उद्योगले पाइसकेको छ । म १२ औं महिला निर्देशकमा पर्छु । सफल हुदाँ पक्कै पनि खुसी लाग्नु स्वभाविक हो । तर, आफु सफल कसरी भए भनेर जग भुल्न भएन । म यो स्थानसम्म आइपुग्नु भनेको टिमको सहयोग हो । टिमले छनोट गरेको विषयवस्तुले मलाई यहाँसम्मको स्थान दिएको छ ।
कुनै बेला तपाईंहरुको टिम प्रत्येक हप्ता टेलिभिजन सिरियल बनाउनुहुन्थ्यो, अहिले वर्षमा झन्डै एउटा फिल्म बनाउनुहुन्छ, सजिलोअप्ठेरो के पाउनुभयो ?
पहिले तितोसत्य बनाउँदा पनि मेहेनत गर्नुपथ्र्यो । अहिले फिल्म बनाउँदा झन् बढी मेहेनत गर्नुपर्छ । वर्षमा एकचोटि फिल्म बनाउनुपर्छ भनेर सुख पाइदैन । सिन सुटिङ गर्न मात्र ६० दिन लाग्यो छक्कापञ्जा–२ लाई । यसको स्क्रिप्ट, सम्पादन, मार्केटिङका कुरा गरेमा हप्तैपिच्छे बनाउनेभन्दा वर्षमा एकचोटि बनाउनेमा दुःख छ । तर, दुःख र मेहेनतको फल मिठो हुनेरहेछ ।
तितोसत्य कतिको मिस गर्नुहुन्छ, यो कमब्याक हुने कतिको सम्भावना छ ?
तितोसत्यलाई एकदम मिस गर्छु । किनभने यहीबाट सिकेर नै अहिले फिल्म निर्देशन गर्न सक्ने भएकी छु । अभिनयमा त्यतिकै खारिने मौका दियो । अहिले नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने प्रायः हास्य सिरियल कमब्याक भइरहेको छ । तितोसत्य पनि मिडिया हबसँग कुरा मिलेमा कमब्याक हुने सम्भावना छ नै ।